Sen Nuuro Faarax “Magacaabista duqa Beladweyne waxay ka dhigantahay in dumarka siyaasadooda soo kabanayso” – Kalfadhi
Senator Nuuro Faarax Jaamac oo katirsan xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhoweysay duqa cusub ee loo magacaabay magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan taas oo ah Haweeney aqoonyahaan qurba joog ah.
Duqa cusub ee magaalada Beladweyne waxaa dorraad loo magacaabay Safiya Xasan Cali (Muniika) oo hore u aheyd Guddoomiyaha degmada Shibis ee gobalka Banaadir waxaana lagu maacaabay digreeto ka soo baxday Madaxweynaha Hirshabeelle.
Senator Nuuro Faarax Jaamac ayaa sheegtay in ay tallaabo wanaagsan tahay magacaabista duqa Beladweyne oo ah dumar waxayna sidoo kale sheegtay in ay soo hagaagayso siyaasadda dumar ee gudaha Soomaaliya oo markii hore joogtay meel hooseyso.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in qof dumar ah loo magacaabo duqa Beladweyne waxayna muujineysaa in ay soo kabaneyso siyaasadda dumarka” ayey Kalfadhi u sheegtay Senator Nuur Faarax Jaamac oo katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Senator Nuuro ayaa ugu hambalyeeysay Safiyo Xasan Cali xilka iyo mas’uuliyadda culus ee loo igmaday waxayna kula dardaarantay in ay wax ka qabato dhibaatooyinka ka jira Beladweyne.
“Waxaan ugu hambalyeeynayaa Walaasheey Safiya xilka darajada ay gaartay waxaana Alle uga baryayaa in uu lagarab galo” ayey tiri Senator Nuuro Faarax Jaamac oo la hadashay Kalfadhi.
Safiyo Xasan Cali duqa cusub ee Beladweyne ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay duq ka noqota magaalada Beladweyne waxa uu xilkaan noqonayaa mid ku cusub dumarka Soomaaliyeed.